Hlola iMontreal, Canada - World Tourism Portal
Hlola iMontreal, eCanada
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeMontreal
Bukela ividiyo mayelana neMontreal
Hlola iMontreal idolobha elikhulu lesifundazwe saseQuebec. I-Quebec City inhloko-dolobha yezepolitiki kepha iMontreal iyidolobha elinamasiko nezomnotho eQuebec futhi yindawo yokungena esifundazweni. Idolobha lesibili ngobukhulu kulo Canada, ungumuzi ocebile ngesiko nomlando nedumela elihle njengenye yamadolobha aphile kunazo zonke eNyakatho Melika. IMontreal iyidolobha lesibili ngobukhulu elikhuluma isiFulentshi (njengolimi lwebele) emhlabeni, ngemuva Paris. Inani labantu baseMontreal licishe libe yizigidi ezingama-1.9, nezigidi ze-4 zisendaweni metro. IMontreal kwesinye isikhathi ibizwa ngeParis yaseNyakatho Melika.
Itholakala esiqhingini esiseMfuleni iSt Lawrence endaweni enomlando ophakeme ukuhamba ngomgwaqo, iMontreal ibiyindawo ekahle kusukela ngaphambi kokufika kwabaseYurophu eCanada. Idolobha elichumayo iStLawrence Iroquoian elalibizwa ngokuthi iHochelaga lalisendaweni yaseMontreal yanamuhla lapho umhloli wamazwe uJacques Cartier aqala ukuvakashela e1535. Eminyakeni eyikhulu kamuva, e1642, idolobhana elincane laseVille-Marie lasungulwa njenge-Sulpician mission nguPaul Chomedey, sieur de Maisonneuve. Kungekudala yaba yisizinda sokuhweba ngoboya. Ngemuva kokubanjwa kwayo ngamaNgisi e1762, iMontreal yahlala (kuze kube ama-1970s) idolobha elibaluleke kakhulu eCanada futhi yayiyinhloko-dolobha yesifundazwe ngama-1840s.
Isimo sezulu saseMontreal siyisimo sezulu esangempela sokuswakama nezwekazi le-4. Idolobha linokushisa okuhle, okushisa kakhulu futhi okunomswakama, ngokuvamile kwentwasahlobo nokwindla, futhi kubanda kakhulu impela futhi kuneqhwa. IMontreal iba ngaphezulu kwamahora we-2,000 wokukhanya kwelanga unyaka nonyaka. Ukuqonda kusesilinganisweni unyaka wonke, ngamamitha ayi-2 azungeze eqhwa ngesizini.
Isikhungo infotouriste de Montréal, 1255 rue Peel, Bureau 100 (rue Sainte-Catherine; metro Peel). I-1 Mar-20 Jun ne-1 Sep-31 Oct: 9AM-6PM nsuku zonke. I-21 Jun-31 Aug: 8: 30AM-7PM nsuku zonke. I-1 Nov-28 Feb: 9AM-5PM nsuku zonke (kuvaliwe i-25 Dec ne-1 Jan).
Ihhovisi Lezokuvakasha lase-Old Montréal, i-174 rue Notre-Dame Est (isuka ku-Pl Jacques-Cartier; metro Champs-de-Mars). I-9AM-7PM nsuku zonke, kusukela ngasekupheleni kukaJuni kuya ekuqaleni kuka-Okthoba. I-9AM-5PM nsuku zonke, unyaka wonke. (kuvaliwe i-25 Dec ne-1 Jan).
Isikhumulo sezindiza saseMontreal sikaPierre Elliott Trudeau (ngaphambili eyaziwa ngokuthi yiDalval Airport) siseduze ne-20 km entshonalanga enkabeni yedolobha e-Expressway (Autoroute) 20. Qaphela ukuthi isikhathi sokuhamba esikhumulweni sezindiza sisuka enkabeni yedolobha singaba njengehora, ngokuya ngethrafikhi. Isikhumulo sezindiza sisebenzela zonke izindiza ezinkulu zaseCanada nase-US futhi siyisikhungo esikhulu se-Air Canada kanye ne-Air Transat. Izindiza zomhlaba wonke zenziwa yi-Air Canada, WestJet, Aeromexico, Cubana, Copa, Air France, iBritish Airways, KLM, Lufthansa, Icelandair, Swiss International Air Lines, Airlines yaseTurkey, Royal Air Maroc, Air Algérie, Royal Jordanian, Qatar Airways ne I-Air China ukusho okumbalwa. Kunezindiza eziningi ezishibhile eziya eMontreal nsuku zonke.
Ulimi olusemthethweni lwesifundazwe saseQuebec isiFulentshi. Yize iMontreal inomlando omude wokuba yidolobha elikhuluma izilimi ezimbili nesiNgisi saseFrance, isiFulentshi siyaqhubeka nokuba limi lokuqala lwedolobha. Kukhona umphakathi obukhulu wama-Anglophones (amaNgisi njengolimi lwawo) ne-Allophones (ulimi olungesilo isiNgisi noma isiFulentshi njengolimi lwabo lwebele). Ngalesi sizathu, i-53.4% yabantu inezilimi ezimbili ngesiNgisi nesiFulentshi. Eminyakeni yamuva nje, iningi labantu abafudukayo abahlala eMontreal sebevele bevela emazweni akhuluma isiFulentshi, ngakho-ke uzophawula izinhlanga eziningi ezahlukahlukene ezikhuluma isiFulentshi.
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eMontreal Canada
I-Old Montreal iqukethe iningi lezakhiwo zomlando, iningi lisukela nge-17th - 19th century, kanye neminyuziyamu eminingi. Ebusuku izakhiwo eziningi zikhanyiselwe kahle. Incwajana Yehhovisi Labavakashi ibeka imephu yokuhamba. Cabanga ukuyilandela kanye phakathi nosuku, uphinde uphinde ebusuku. Kukhona nombhoshongo wamawashi we-45 wamamitha atholakala eQuai de l'Horloge, ekuqaleni owabizwa ngeVictoria Pier, ongakhuphuka kuwo futhi uthole imibono ebabazekayo yoMfula iSt Laurence futhi ngezinga elincane, leli dolobha.
ILe Plateau ihlanganisa imigwaqo yokuhlala ebabazekayo nge-hip yezitolo nokudlela.
IDowntown Skyscrapers, ikhempasi laseMcGill, amasonto neminyuziyamu. Amabhulokhi amaningana axhunywe yi-30 Km yezinhlaka ezingaphansi komhlaba nezindawo ezinkulu zokugcina, okuvumela ukuhamba okunethezekile nokuthenga lapho isimo sezulu sisibi.
I-Parc Jean-Drapeau, indawo ye-1967 World's Fair, manje enikelwe kwizikhala eziluhlaza nendawo enekhonsathi enkulu engaphandle. Umjikelezo womjaho ka-Gilles Villeneuve, ikhaya le-Montreal formula 1 Grand Prix. Ibhishi lokufakelwa, indawo enkulu yamachibi angaphandle, kanye neMontreal Casino nazo zitholakala epakini noma ezungezile.
Amakhilomitha ambalwa ahamba ngeMetro enyakatho, iHochelaga-Maisonneuve inikeza i-Olimpiki Stadium, Insectarium, Jardin Botanique, neBiodôme. Vumela amahora amane ukubona amane.
IMontreal idume ngobuciko bayo basemgwaqweni obuhle. IWander ngaseSanta Laurent Boulevard phakathi kweSherbrooke neLaurier metros ukuze ibambe amazwibela ezinye zalezi zimoto ezihlaba umxhwele. Ungasebenzisa futhi i-Graffmap ku-smartphone yakho ukusiza ukuthola ama-murals ngale kwe-Saint Laurent Boulevard ngenkathi ngesikhathi esisodwa uhlola izindawo ezintsha zedolobha. Enye indawo enconyelwe ukubonwa kwe-mural indawo yomgwaqo iSt Denis Street phakathi kweSherbrook neLaurier, kanye nezindawo ezisePark Extension kanye nokuphela kweMile.
I-Oratory yase-Saint Joseph Canadaisonto elikhulu kunazo zonke. Yayakhiwe eMount Royal'sountmmit Summit enikeza umbono omangalisayo wedolobha, ikakhulukazi lapho kushona ilanga. (6AM to 9PM)
Okufanele ukwenze eMontreal Canada
Yize umnotho weMontreal ubudlangile eminyakeni yamuva nje, leli dolobha lisabiza kakhulu. Ukuthengwa kweMontreal kusukela ezitolo zesabelomali sezomnotho kuya kwimfashini ephezulu, kube nobubanzi obukhulu phakathi.
URue Ste-Catherine, phakathi kukaRue Guy no-boulevard St-Laurent, uneminyango eminingi nezitolo ezinkulu kanye nezitolo ezinkulu ezimbalwa. I-Avenue Mont-Royal inezinto ezijabulisayo kanye nezitolo zezingubo ezivela e-boulevard St-Laurent iye e-rue i-Saint-Denis kanye nesikhwama esixubile sezitolo zomakhelwane, kwasetshenziswa amarekhodi ezitolo, kanye nezindawo zokuzenzela ezimnandi zaya empumalanga zibheke e-avenue Papineau. I-Rue St-Viateur ingenye yezitaladi ezijabulisa kakhulu leli dolobha, kanti uhla lwamabhizinisi abo luhlotshiswe ngendlela emangalisayo phakathi kweBoulevard St-Laurent ne-Avenue du Parc.
ISt-Laurent ihlala ingenye yemigwaqo eyinhloko yedolobha yokuthenga, nangaphezulu ubude bayo bonke. Cishe noma yini ingatholakala lapho, enamabhulokhi ahlukene enamaqoqo ehlukene amabhizinisi (ukudla kwase-Asia kanye nezindlu zezindlu eduze kwase-La Gauchetière, ngogesi oshibhile okude kakhulu, izindawo zokuphumula ze-hip phakathi kwePrince-Arthur neMount Royal, noma yini nayo yonke into yaseNtaliyane phakathi kweSanta- UZotique noJean-Talon). URue Sherbrooke odedayo, entshonalanga kwe-Autoroute Décarie, unenqwaba yokuthakazelisa okwandayo kwamabhizinisi athinta ukudla. Imakethe yaseJean-talon, eseduze komgwaqo waseJean-talon kanye neSt-Laurent inama-product ahlukahlukene emikhiqizo yasendaweni nemikhiqizo yokudla (isiraphu ye-maple, ushizi, njll.) Ngamanani amahle kakhulu.
Amathambo wezimbali atholakalayo kuma-rue Saint-Denis, enyakatho ne-rue Sherbrooke naseningizimu ye-avenue Mont-Royal estres, kanye ne-rue Saint-Laurent (iyaqhubeka kuze kufike enyakatho eBernard). Lesi sakamuva sisehlelweni lokuba ngaphezulu kwezinga eliphezulu, ngakho-ke uhla lokuthenga luhluka kakhulu futhi luphansi kwabantu lapho umuntu eya enyakatho neMont-Royal. IRue Sherbrooke ngokwayo inezitolo eziningi ezisezingeni eliphakeme (ikakhulukazi iHolt Renfrew) nemidwebo yobuciko kwezohwebo kumucu omfishane oqhubeka cishe usuka eMcGill University ngasentshonalanga uye eRue Guy. Ngasentshonalanga, iSherbrooke ingena ngeGreene Avenue eWestmount, enomugqa omfishane kodwa omnandi wokuthengisa. I-Avenue Laurier, phakathi kwe-St-Laurent nokuphela kwayo ngasentshonalanga, ingesinye sezindawo eziphambili zedolobha lokudla nokuthenga ngesitayela esiphakeme, yize kuseneendawo ezimbalwa ezingabizi lapha nalaphaya.
Ifenisha nezinto zasendulo
On boul. ISt-Laurent, inhlanganisela yezitolo ezisezingeni eliphezulu yasekhaya ikhulile eminyakeni yamuva. Kuqala cishe ekhoneni lika-rue Marie-Anne futhi kugqame kakhulu ebhlokini phakathi kwe-rue Marie-Anne ne-avenue Mont-Royal, ene-sparser, kepha izitolo ezithokozisayo kuze kufike enyakatho njenge-rue Saint Viateur. Ama-buffs ama-Antique azothola izitolo ezithokozisayo kulo lonke idolobha, kepha azofuna ukwenza uhambo olukhethekile lokuyovula i-Notre-Dame est, uma usuka empumalanga usuka e-avenue Atwater. IRue Amherst, edolobhaneni laseGay, nayo inesibalo esikhulu sabathengisi bakudala.
Ukuthi udlani futhi uphuze eMontreal
Izitolo ezithwebula izithombe zivame ukuba nezindawo zokugcina i-inthanethi ezitholakalayo, njengoba kwenza amakhekhe amaningi nezitolo zezincwadi ezithile. Inkampani yezingcingo iBell ifake izikhungo zomphakathi ze-inthanethi (ukheshi noma amakhadi wesikweletu) eziteshini zikaMasipala iMcGill kanye neBerri-UQAM.
Kukhona futhi amakhofi esikhathi eside e-cyber / internet (okususa ingxenye yekhofi) ezindaweni eziningi eMontreal.
Kuyiqiniso, ukufinyelela kwe-intanethi kwamahhala uhlobo oluhle kakhulu lwe-inthanethi. Inhlangano i-Île Sans Fil inikezela nge-inthanethi yamahhala engenawaya emakhefu nakwezinye izindawo kulo lonke idolobha. Bheka isitika ngaphandle kwezindawo zokubamba iqhaza. Idolobha lase-Eaton Center linikeza ukufinyelela kwamahhala kwe-wireless enkantolo yokudla. Ngaphezu kwalokho izitolo eziningi zekhofi eMontreal zinikeza i-Wi-Fi yamahhala kumakhasimende abo.
Futhi, iGrande Bibliothèque (Library enkulu) ineziteshi eziningi ze-inthanethi zamahhala: ungathola ikhadi lomtapo (mahhala izakhamizi zaseQuebec ezinobufakazi bekheli) ukuyisebenzisa lapho.
Kwezimo eziphuthumayo shayela i-9-1-1.
Yize iMontreal iyidolobha lesibili ngobukhulu eCanada, ihlanganyela namanani aphansi obugebengu baseCanada enza ukuba iphephe. Kodwa-ke, ubugebengu bempahla, okubandakanya ukwebiwa kwezimoto, buphakeme ngokumangazayo, ngaphandle kokubonakala okuphambene nalokho: qiniseka ukukhiya iminyango yakho futhi ugcine izinto zakho zenani elikhulu nawe.
Lokhu kushiwo, izivakashi eziningi ziyamangala ukuthi izizwa iphephe kangakanani iMontréal uma iqhathaniswa namanye amadolobha aseNyakatho Melika. Emiphakathini eminingi, izingane zidlala emigwaqweni engagadiwe ngabazali, iminyango namafasitela ashiywe evuliwe ngesikhathi sasehlobo, amabhayisekili avikelekile ngamakhiye akhanyayo futhi ashiywe ngaphandle ubusuku bonke, futhi abantu babonakala bezimisele ngokulondoloza umoya wokuphinda wedolobha.
Ingxenye yemigwaqo yedolobha laseMontreal iSainte-Catherine yedolobha eliyingxenye yempi enhle kunazo zonke, ikakhulukazi empumalanga ye-Place des Arts. Kukhona abantu abangenamakhaya abahlanganyele phakathi nehlobo futhi bayawa. Yize iningi labo linokuthula, kukhona ezinye ezinolaka kakhulu. Gwema abantu abazulazula emigwaqweni ebonakala bedakiwe. Umgwaqo usengozini enkulu ekuzungezeni i-3: 00 am lapho kuvalwa amaklabhu nemigoqo engenalutho kuthulula izixuku zabo ezidakiwe zingene emgwaqweni. Ungahle uhlangane nezikhwama ngezikhathi ezithile zobufebe basemgwaqweni, ikakhulukazi ezizungeze amaklabhu e strip.
EMontreal, amaphokhethi akujwayelekile kakhulu, kepha gcina iso ezintweni uma ubuka ukusebenza komgwaqo edolobheni elidala noma kwezinye izixuku.
IMontreal imvama kakhulu futhi ibanda ebusika, qaphela ngokugqoka kahle imibandela futhi unake iqhwa noma iqhwa noma kunini lapho ushayela noma uhamba. Akuzwakali ukuthi izivakashi zithole i-frostbite yokuhamba amabhlogo amaningana elangeni kodwa kubanda ngosuku lwe--35 ° C noma kubanda ngaphandle kwezingubo ezifanele. Izingubo zangaphansi ezinde zinconywa kakhulu ukugwema izinkinga ze-frostbite kanye nokujikeleza kwegazi. Ukuqedwa kweqhwa emgwaqweni kuvame ukusebenza kodwa qaphela iqhwa elimnyama elihlala likhona!
Ihlobo lishisa impela futhi lingaba nomswakama kakhulu. Ukuzungezwa imifula kuyenezela kulokhu. Gcina i-hydrate.
Njengakuyo yonke iQuebec, ezombusazwe ezilimini nobukhosi baseQuebec yizinkinga eziphikisanayo eMontreal. Ungenzi umcabango wokuthi wonke amaQuebecers afuna ukuhlukaniswa neQuebec Canada njengoba abaningi bemelana nayo. Uma ufuna ngempela ukuxoxa ngalezo zihloko nabantu bendawo, qiniseka ukuthi unolwazi kahle. Kusekuphephile kakhulu ukugwema isifundo, ngoba kuseseyinkinga engokomzwelo kakhulu. Sebenzisa umqondo ojwayelekile futhi ube nenhlonipho.
Ulimi lokuqala kuyo yonke iQuebec isiFulentshi. Ukwenza umzamo wokusebenzisa ulimi kuyindlela enhle yokukhombisa inhlonipho kubantu bendawo, noma ngabe bayakwazi ukukhuluma isiNgisi, noma ngabe ungaphatha amagama ambalwa kuphela ngezwi eliqine kakhulu. Kodwa-ke, kufanele kuphawulwe ukuthi iMontreal ibhekwa njengenye yamadolobha anezilimi ezimbili emhlabeni enabadlali abambalwa kakhulu abahlali abalulimi lwabo oluyisiNgisi. Uma kwenzeka ungabaza, ungahle ufune ukuvula nge “Bonjour!” (Usuku oluhle) bese ubona ukuthi yiluphi ulimi olusetshenziswayo ukuphendula. Kungenzeka ukuthi uzophendulwa ngesiNgisi, uma isiFulentshi sakho singazwakali endaweni. Zama ukungakhubeki uma uzama ukukhuluma isiFulentshi futhi abantu bendawo baphendula kuwe ngesiNgisi. Njengoba iningi lamaMontreengesi likhuluma isiFulentshi nesiNgisi kalula, bazama nje ukwenza izinto zibe lula kuwe.
Abantu abaningi kuleli dolobha futhi ikakhulukazi labo abasebenza embonini yezivakashi kanye nezinsizakalo bakhuluma izilimi ezimbili ngokuphelele noma ngabe luluphi ulimi ngaphandle kokuphikisana nokwakha idolobha. Ungenzi amahlaya ngabantu baseFrance (ikakhulukazi njengoba ama-francophones eMontreal ikakhulukazi amaQuébécois anama-Acadiens ambalwa noFranco-Ontariens, bonke abazibona njengabahlukile kulaba baseFrance France futhi kusuka komunye nomunye futhi kuyacaca nje ukuthi awuzwisisekanga!). Futhi, ungacabangi ukuthi wonke amaQuébécois angama-francophones. IMontreal inomphakathi obalulekile okhuluma isiNgisi onomlando omude eQuebec kanye nabokufika abaningi abalulimi lwabo lokuqala akusona isiNgisi noma isiFulentshi.
IMontreal yenza indlela yokungena enhle yokuhambela amanye amadolobha nezindawo eziseQuebec naseNyakatho Melika. Khumbula ukuthi kuzodlula umthetho olawula umngcele uma uya e-US, bese uzihlomisa ngama-visa namaphepha afanele. Ngeza okungenani ihora elilodwa ngaphezulu kulawulo lomngcele.
I-Quebec City, cishe amahora we-3 asiya empumalanga esenyakatho ku-Highway 40, cishe kodwa akusiwona neze uhambo losuku. Uzofuna ukuhlala ngaphezulu, noma kunjalo.
IMont Tremblant ilele ngaphansi kwamahora amabili enyakatho eLaurentides.
Amalokishi aseMpumalanga angamahora amabili kuya kwamathathu aqonde empumalanga.
Hlola amalokishi aseMonteregie, idrayivu emfushane empumalanga yeMontreal.
Ottawa amahora amabili entshonalanga ngemoto.
Toronto kukude kakhulu, kepha kuseyindlela yokushayela yamahora ayisithupha (noma uhambo lwehora lesitimela le-4.5 olusheshayo).
I-Adirondacks iyi-drive yamahora amabili nengxenye eningizimu. I-Adirondacks yipaki elikhulu kunawo wonke e-United States futhi inikezela ngemisebenzi yangaphandle efana nokuhamba ngezinyawo, ukugibela izikebhe nokushushuluza.
IBoston ihora lesihlanu ukuya eningizimu mpumalanga.
IChateau Montebello, etholakala ihora nesigamu entshonalanga eMontebello, yenzela ukuthola imali yothando noma ukuma ohambweni oluya e-Ottawa.
Phakathi kukaDisemba noMashi kube nokuhle ukushushuluza e-Laurentians kanye nasemalokishini aseMpumalanga. Kunezikhungo ezinhle kakhulu zokushushuluza ubusuku njengeSki Bromont neMont-St-Sauveur.
I-Tadoussac, eqhele cishe ngamahora ayisithupha ngemoto, ibuka kakhulu umkhomo
New York City yi-drive yamahora ayisithupha nesigamu nje ngqo eningizimu.